SAS Liiska magaalooyinka cusub ee gudaha iyo dibaddaba
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » SAS Liiska magaalooyinka cusub ee gudaha iyo dibaddaba
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Denmark War Deg Deg Ah • News • Wararka Norway • Dib-u-dhiska • War Deg Deg Ah Sweden • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
Nidaamka Duulimaadyada Scandinavian (SAS) waxaa la aasaasay 1946 iyada oo loo marayo heshiis wadaag ah oo dhexmaray saddex shirkadood oo Scandinavian ah - Det Danske Luftfartselskab, oo ah dayuurad Danish ah; Den Norske Luftfartselskap, oo ah shirkad xambaara hawada Norway; iyo Svensk Interkontinental Lufttrafik AB, oo ah diyaarad Swedish ah.
Maanta SAS weli waa xoog badan tahay waxayna ku socotaa isbeddel ballaadhan in kasta oo ay jirto masiibo COVID-19 oo adag.
SAS waxay kordhisaa twuxuu ka duulayaa magaalooyinka waaweyn ee Scandinavianka Stockholm, Copenhagen, Oslo, iyo Bergen si uu u aado meelaha muhiimka ah ee shabakadiisa si uu u sii wanaajiyo isku xirnaanta dadka socotada ah.
SAS waxay hadda u adeegi doontaa dhammaan meelaha ay u socoto ee Norway iyo Sweden marka la furo waddada Arlanda-Sundsvall bisha Sebtember.
Tirada duullimaadyada SAS ee tagaya meelaha muhiimka ah ee rakaabka diyaaradaha ee Yurub ayaa sii kordhaya.
Xiisaha sii kordhaya ee safarada dhammaadka wiigga iyo fasaxa magaalada ee magaalooyinka Yurub ayaa ka dhigaya SAS inay dib u bilowdo waddooyinkeedii Amsterdam, Dublin, Florence, Krakow, iyo Prague. Waxa kale oo jira tiro sii kordhaysa oo duullimaadyo ah oo ku wajahan meelaha kulul ee Mediterranean -ka ee koonfurta Yurub iyo Jasiiradaha Canary si ay u daboolaan baahida sii kordhaysa ee dalxiisayaasha.
SAS waxay duulimaadyo toos ah ka duuli doontaa caasimadaha Scandinavian -ka ilaa dhowr meelood oo Mareykan ah laga bilaabo Sebtember iyo sidoo kale waxay joogi doontaa Aasiya waddooyinka Copenhagen ilaa Tokyo iyo Shanghai.
SAS waxay sii wadaa inay keento dayuurado cusub oo shidaal fiican leh waxayna leedahay mid ka mid ah maraakiibta ugu casrisan Yurub. Diyaaradda cusubi waxay 15-30% ka yar tahay isticmaalka shidaalka, marka la barbar dhigo diyaaradda ay beddelaan. Diyaaradda cusub ee ugu casrisan ayaa siin doonta macaamiisha SAS hab lagu safri karo oo raaxo leh, raaxo leh, oo waara.
SAS waxay ku xireysaa Scandinavia adduunka oo u adeegaya meelaha soo socda:
Luleå Bergen Bardufoss Xiddig
Skellefteå Xiddig Bodø Ålesund
Alicante Athens Lakselv Xiddig
Barcelona Bologna Xiddig Bergen
Larnaka Helsinki Faro Ålesund
Lisbon Larnaka Gazipasa
faragooysta Miami Manchester
Naasaha faragooysta Miami
New York Munich faragooysta
Nice Naasaha New York